'Jonga & Phakathi Kude' iKhaya laseNtabeni elipholileyo kunye nebhafu eshushu - I-Airbnb
'Jonga & Phakathi Kude' iKhaya laseNtabeni elipholileyo kunye nebhafu eshushu
Iintaba ziyabiza kwaye sinendawo yakho. Yiza wonwabele eli khaya lihle lihlaziyiweyo linebhafu eshushu kwindawo yaseAshe Lake yaseNtshona Jefferson, NC. Ikhaya lethu lokulala eli-3 lineebhedi zokumkani ezi-2 kunye nokumkanikazi oyi-1, iibhafu ezimbini ezigcweleyo ezineeshawa zokumisa, ikhitshi eligcwele kakuhle, iindawo ezitshisa iigesi ezi-2, iindawo zokuhlala ezingaphandle ezimangalisayo, kunye nendawo yomlilo. Yonwabela ukuthenga okuninzi edolophini kunye neendlela ezininzi zokutyela, indawo yokusela utywala, thatha uhambo ngeBlue Ridge Pkwy, uhambe ngeendlela ezininzi ezikufutshane, okanye uphumle nje!
Ikhabhathi yethu ehlaziyiweyo yeentaba inombono omangalisayo wokuphuma kwelanga ukusuka phambi kwendlu kunye neendawo zethu zokuhlala ngaphandle. Ukufikelela endlwini kungena kucango oluphambili lwangaphambili oluseti yezinyuko zamaplanga ezikhokelela kwiveranda yethu enkulu/indawo yokuhlala yangaphandle kunye neendawo zokuhlala eziphakamileyo ezishushu. Xa ungaphakathi, uya kufumana indawo yokuhlala enkulu, ikhitshi, indawo yokutyela, igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, kunye neenyawo ezinkulu kwishawari enentloko yokuhlambela kabini kumgangatho omkhulu. Phantsi iseti yezitepsi ezijiyileyo zentsimbi yindawo yokungena yegumbi lodaka, indawo yokuhlamba impahla, ibhafu epheleleyo, kunye namagumbi okulala amabini, elinye linebhedi yenkosi kunye nendawo yomlilo yegesi kunye negumbi lesithathu lokulala linebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi. Kukho iingcango zaseFransi kulo mgangatho okhokelela ngaphandle ukuze ufikeleleke lula kwaye ungenise imithwalo, njl.njl Ukuhamba nje kancinci kwindlela ikuzisa kwindawo epholileyo yomlilo yangaphandle enendawo yokuhlala eninzi yee-smores kunye neziselo emlilweni.
60" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Sibekwe kufuphi nencopho yentaba e-Ashe Lake, ekuphela kwechibi e-Ashe County kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwimbali yaseWest Jefferson. Le dolophu inqabileyo ilikhaya lokuthenga, ukukhwela i-rafting, umzi-mveliso we-Ashe Cheese, iCawe yeFrescos, iindlela zokunyuka intaba, kunye nezinye izinto ezininzi ezimangalisayo. IBoone yimizuzu engama-25 kuphela kwaye ukufikelela kwiBlue Ridge Parkway yimizuzu eli-10 kuphela.
Zive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nam ngokusebenzisa le ndawo ngayo nayiphi na imibuzo. Nje ukuba ulugcine uhambo, uya kukwazi ukuthumela umyalezo okanye umnxeba kum ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo.